Real Gaming Myanmar - Page 38 of 114 - Real Gaming & Technology
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ် …..ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ……
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ် …..ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ…… အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ။ ဒီအတိုင်း ဆက်တက်နေရင် …
အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး FANI သတင်း…. ည နေ (၄း၄၇)နာရီထုတ်ပြန်ချက်…. လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနမှ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) နှင့်ပတ်သက်၍ …
တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုအကြောင်း သိရသမျှအပြည့်အစုံ
တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုအကြောင်း သိရသမျှအပြည့်အစုံ တောင်ကြီးမြို့ ကံ သာရပ်ကွက် မင်္ဂလာလမ်းရှိ မြင်း ဖြူနှစ်ကောင် တိုင်းရင်းဆေးတိုက် တွင် ဧပြီ ၂၇ ရက် ညဉ့်နက်ပိုင်းက …
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျှင် ရက်ပိုင်းအထိကြာတတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာရီပိုင်းအတွင်း လျှပ်စစ်မီးပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဒုဝန်ကြီးပြောကြား
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျှင် ရက်ပိုင်းအထိကြာတတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာရီပိုင်းအတွင်း လျှပ်စစ်မီးပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဒုဝန်ကြီးပြောကြား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုသည် အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံမှာကဲ့သို့ နာရီပိုင်းအတွင်းပြန်မရနိုင်ဘဲ ရက်ပိုင်းအထိကြာမြင့်တတ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန …
ရွှေတိဂုံ​စေတီ​တော်​ပန်း​မွေ့ရာခင်းပူ​ဇော်​ခြင်းနှင့်​ဆီမီး၉ထောင်ထွန်းညှိပူ​ဇော်​ ဧပြီလ ၂၈ ရက်ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး အောင်မြေတွင် ပန်းမျိုးစုံ အပွင့်ပေါင်း ၅ သိန်းကျော်ဖြင့် ပန်းမွေ့ရာခင်းပူဇော်ခြင်း ဆီမီး ၉ ထောင် ထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းကို Strategy …
ဒီဂီယာရဲ့အမှားကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ ယူနိက်တက်
ဒီဂီယာရဲ့အမှားကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ ယူနိက်တက် ယနေ့ည မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစား နေကြတဲ့ အသင်း ၂သင်း ဖြစ်တဲ့ …
Dota2အသင်းကို Release လုပ်ခဲ့သည့် Team No Throne
Dota2အသင်းကို Release လုပ်ခဲ့သည့် Team No Throne လက်ရှိမြန်မာနိင်ငံမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး Dota2အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Team No …
နာဂစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် Sunday, April 28, 2019 နာဂစ်မုန်တိုင်းထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင် တယ်လို့ မိုး/ …
iPhone User တွေ ဒဲ့အထည့်ခံနေရသောဂျင်းများ
iPhone User တွေ ဒဲ့အထည့်ခံနေရသောဂျင်းများ ဂျင်းမမိစေချင်လို့ ရေးတဲ့ စာပါ ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပီးရင် အကျိုးရှိစေရမယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ အားလုံးသတိထားမိကြလား မသိဘူး။ ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ အပြင်သွားရင် အရင်တုန်းက ထက်ပိုပီး …
နွံအိုင်နားက မျက်​ရည်​စနဲ့ တရားပွဲ
နွံအိုင်နားက မျက်​ရည်​စနဲ့ တရားပွဲ ​ဟျောင့်​​တွေ… ငါတို့ နှစ်​ဆန်းတစ်​ရက်​​နေ့ကဘုန်​ကြီး​ကျောင်းမှာ အတူ သီလယူ တရားနာခဲ့ကြ​သေးတယ်​ …. ငါမှတ်​မိ​နေဆဲပဲ အဲ​နေ့က ငါတို့​တွေ ၄မိုင်​​လောက်​​ဝးတဲ့ ဘုန်းကြီး​ကျောင်းကို ပျော်​ရွှင်​စွာနဲ့ …